by CHANNEL+ December 24, 2020
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုးရီးယားမှာပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေ လူကုန်ကူးတာတွေ မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေခေတ်ထနေတဲ့အချိန်ပေ့ါ....လူဆိုးဂိုဏ်းတခုမှာ အဖမ်းခံထားရတဲ့ချစ်သူကိုသွားကယ်တဲ့ဂျွန်ဆန်းဟာလူဆိုးတွေရဲ့ညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခံရပြီး ခြေထောက်တဖက်အကြောဖြတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဂျွ....န်ဆန်းရဲ့ချစ်သူဟာလည်းမျက်လုံးတဖက်ဓါးနဲ့အလှီးခံလိုက်ရတယ်…နောက်ငါးနှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဂျွန်ဆန်းတို့စုံတွဲဟာ သူတို့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူဆိုးဂိုဏ်းက ခေါင်းဆောင်သုံးယောက်ကိုလက်စားချေဖို့အတွက်မိန်းကလေးသုံးယောက်ကိုငှားရမ်းခဲ့ပါတော့တယ်….
ထိုသုံးယောက်ကတော့ ရုပ်ရှင်စတား ဂျေဘင်း…ယောကျာ်းတွေကိုမြူဆွယ်ရာမှာတော်တဲ့ ဟေရင်းနဲ့
ရည်စားပွေရှုပ်တဲ့ ဟန်ယူဟီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်…ထိုသုံးယောက်က ဘယ်လိုလက်စားချေကြမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုကြပါအုံးဆို့...မိမိပြုလုပ်သောမကောင်းမှုသည်မိမိဆီကိုပြန်လာတတ်သည်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကိုအခုကားမှာ တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်…စကားလုံးများနှင့် ဇာတ်ဝင်ခန်းများသည်
ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ကိုးရီးယားမွာျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းေတြ လူကုန္ကူးတာေတြ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ေတြေခတ္ထေနတဲ့အခ်ိန္ေပ့ါ....လူဆိုးဂိုဏ္းတခုမွာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ခ်စ္သူကိုသြားကယ္တဲ့ဂြၽန္ဆန္းဟာလူဆိုးေတြရဲ႕ညင္ပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုခံရၿပီး ေျခေထာက္တဖက္အေၾကာျဖတ္ခံလိုက္ရပါတယ္ဂြၽ....န္ဆန္းရဲ႕ခ်စ္သူဟာလည္းမ်က္လုံးတဖက္ဓါးနဲ႕အလွီးခံလိုက္ရတယ္…ေနာက္ငါးႏွစ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာဂြၽန္ဆန္းတို႔စုံတြဲဟာ သူတို႔ကိုႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့လူဆိုးဂိုဏ္းက ေခါင္းေဆာင္သုံးေယာက္ကိုလက္စားေခ်ဖိဳ႕အတြက္မိန္းကေလးသုံးေယာက္ကိုငွားရမ္းခဲ့ပါေတာ့တယ္….
ထိုသုံးေယာက္ကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္စတား ေဂ်ဘင္း…ေယာက်ာ္းေတြကိုျမဴဆြယ္ရာမွာေတာ္တဲ့ ေဟရင္းနဲ႕
ရည္စားေပြရႈပ္တဲ့ ဟန္ယူဟီးတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္…ထိုသုံးေယာက္က ဘယ္လိုလက္စားေခ်ၾကမယ္ဆိုတာကိုၾကည့္ရႈၾကပါအုံးဆို႔...မိမိျပဳလုပ္ေသာမေကာင္းမႈသည္မိမိဆီကိုျပန္လာတတ္သည္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကိုအခုကားမွာ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္…စကားလုံးမ်ားႏွင့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားသည္
Link - http://bc.vc/Hp8aKqN
Link - https://ouo.io/wjA1atj
Link - https://mkvlinks.xyz/6PNVNxs